Ngomhla wamashumi amabini kaJuni, inkundla yaseMoldova idlulisele isigwebo kwimeko ye-Ilan Shor. Umntu-shishini ugwetywa iminyaka engama-7.5 entolongweni. Nangona iigqwetha ze-Shore zizama ukukhenkcela kwisigqibo senkundla, kwaye umntu onetyala uhlala eChisinau, ekhononda ngempilo yezempilo engafanelekanga, umfazi wakhe uphoswa yinto enye yomculo.
EJasmine I-Instagram ungasoloko ubona iifoto zakhe ezintsha kwiikonsathi. Umculi ubonakala enhle, intsapho yakhe ayinasiphumo ekubonakala kwayo.
Umdlali we-actress usandul 'utshaya emthendelekweni othi "Ukushisa" eBaku, kwaye ngaphambi kokuba uJasmine anike uluhlu lwamakhonsathi eKrasnodar Territory, watyelela "i-Slavianski Bazaar" eVitebsk ...
Indawo yodwa apho umculi unzima ukuyifumana indlu yomyeni wakhe eMoldova.
Umculi uJasmine wahlwaywa ngenxa yexesha lokuzonwabisa xa umyeni wakhe ekhonza ixesha
Namhlanje u-Jasmine kwi-Instagram yakhe uthumele uluhlu lwezithombe ezintsha ukusuka kwabanye. Emva kweBaku umdlali wezandla kunye nabantwana baya kolwandle.
Iifoto ezimbalwa kunye noMargarita okhulayo, osele ezama ukubiza izicathulo zikamama wakhe, wathintela abalandeli beemvumi.
Nangona kunjalo, uJasmine wafunyanwa phakathi kwababhalisi be-Instagram nabagxeki. Umculi wayemangalelwa ngokukhetha ukuhamba ngokuzonwabisa, kunokuba abe nomyeni wakhe ofuna inkxaso kunanini ngaphambili:
___kssh___ Kuyamangalisa ukuba awukho kumyeni wakhe ... Abafazi mababe kunye nomyeni wakhe. Kwaye uhamba ngeholide okanye kwiholide
Umculi wagqiba ekubeni aphendule abachazi beemfuno. Kwiingxoxo, uJasmine wuleza wabeka abagxekayo bakhe:
Uxolo @___kssh___ Owu, siyaxolisa nceda 😊, ukhohlwa ukukubuza, ngokuzayo uqiniseke 🙏
Nangona kunjalo, umchasi welichasayo akayekanga, ebonisa ukuba akabukeka njengowesifazane okhathazayo ngomyeni wakhe:
___kssh___ @jasminshorofficial Konke okulungileyo kuwe kunye nezingane ... nje ngenxa yobomi bakho, awubuki njengomlingane osizilayo ...
Yaye ucinga njani - ngaba umfazi uhlale kunye nomyeni wakhe ukuba unengxaki ezinzulu? Siyabona kwiZen le ngcaciso 👍 kwaye sihlala siyazi zonke iinjongo kunye neentlanzi zezoshishino.
Indlela yokukhetha iwashi elungileyo lendlu yakho?
Unyango lwezonyango kunye neyeza kunye namacandelo omntu
Ngaba uyazi ukuba ngubani la madoda kunye noko batya?